Izvo Zvimiro zveMweya Mutsva Disinfection Bhokisi Sisitimu
(1) Inactivation inoshanda
Uraya hutachiona mumhepo munguva pfupi, zvichideredza zvakanyanya mukana wekutapukirwa kwehutachiona.
(2) Chiito chakazara
Mhando dzakasiyana dzekuchenesa ioni dzinogadzirwa uye dzinoburitswa munzvimbo yese, uye zvinosvibisa zvakasiyana zvinosvibisa zvakaora, izvo zvinoshanda uye zvine mutsindo.
(3) Zero kusvibiswa
Hapana kusvibiswa kwechipiri uye zero ruzha.
(4) Yakavimbika uye iri nyore
(5) Yakakwira mhando, inyore kuisa uye kugadzirisa
Kushanda: imba yekugara, hofisi diki, kindergarten, chikoro nedzimwe nzvimbo.
Kuvaka mweya wemhando yepamusoro unoita basa rakakomba muhupenyu hwedu hwese nekuda kweiyo nguva yese yatinopedzera mumba (~ 90%) uye kugona kwezvivakwa kuita zvakanaka kana zvisina kunaka kukanganisa musangano wedu, hutano, kugadzirwa uye hunhu hwekurara, mweya mutsva ndicho chakakosha chinhu chinogadzira chivakwa chemhepo mhando.
Mu2020, nekuda kwekuputika kweCovid-19 pasirese, vanhu vanowedzera hanya nezve mhando yemweya mutsva Nezve izvo, isu takagadzira chigadzirwa chitsva neUVC mwenje & yekurapa photocatalytic firita yekuuraya utachiona / hutachiona mumhepo nyowani, nekudaro kuunza nyowani & hutano mweya kune vanhu vari mumba, iyo inoshandiswa zvakanyanya muchikoro, kuvaka hofisi, chipatara, mafirimu, nzvimbo yekudyira, nezvimwe.
Zvimiro zveSisitimu Ino
Mashandiro anoita Rutsva Mhepo Disinfection Bhokisi
* Standard Model inoenderana neyakajairwa ERV chigadzirwa
* Yakasarudzika Model inoenderana neyakadzvanywa FCU & AHU
Yakachena Nyowani yemhepo disinfection Bhokisi
Piping Schematic Standard Nyowani yemhepo disinfection Bhokisi
Chirevo cheGermicidal Efficacy
Pashure: Mukati-Kamuri Precision Mhepo Inodzora (Chinongedzo-Mhepo Series)
Zvadaro: Mhepo Inochenesa ine Disinfection Basa
Yakanakisa Kunatsa Mhepo
Yekutengesa Mhepo Inonatsa
Yese Imba Mhepo Inonatsa